Global Appeal for UN Action
UN member states should act to pressure Myanmar to end crimes against humanity We,aglobal coalition of 87 civil society organizations, urgently call upon UN member states to take immediate steps to address the human rights abuses and humanitarian catastrophe engulfing Myanmar’s ethnic Rohingya population. UN Secretary-General Antonio Guterres and UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad al Hussein have described the Myanmar security forces’ ongoing campaign against the Rohingya in northern Rakhine State as ethnic cleansing. As more evidence emerges, it is clear that the atrocities committed by Myanmar state security forces amount to crimes against humanity. The United Nations and its member states need to take urgent action. We urge UN delegations, especially those from the 114 countries committed to the Accountability, Coherence and Transparency (ACT) Code of Conduct, who madeapledge to support “timely and decisive action” to prevent or end the commission of genocide, crimes against humanity, and war crimes, to immediately undertake efforts to adoptaresolution in the UN General Assembly addressing the situation, and call upon the UN Security Council to consider measures to be imposed on the Myanmar government. Over 400,000 Rohingya have fled across the border into Bangladesh since August 25, when Myanmar security forces launched operations in response to coordinated attacks by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) in Rakhine State. These operations, involving widespread killing, laying of landmines, looting, and arson targeting the Rohingya, have resulted in the mass destruction of more than 200 villages, according to satellite imagery and eyewitness testimony. Tens of thousands of people from other ethnic minorities have also been displaced asaresult of the violence. Strong condemnations by the UN and world leaders have not brought an end to Myanmar’s atrocities. In his opening statement to the Human Rights Council on September 11, al Hussein noted that in 2016 he “warned that the pattern of gross violations of the human rights of the Rohingya suggestedawidespread or systematic attack against the community, possibly amounting to crimes against humanity.” Civil society organizations have warned that the campaign of Myanmar’s security forces against the Rohingya since August 25 amounts to crimes against humanity. It is crucial for UN members to take concrete action and place direct pressure on Myanmar’s military and civilian leaders. The European Union, until recently, was the chief sponsor of an annual resolution on human rights in Myanmar at the General Assembly. Last year, the EU decided to stop the effort even in the midst of government violence against the Rohingya beginning in October 2016. Now, we urge members of the EU to work with the Organization of Islamic Cooperation, and the Association of Southeast Asian Nations, as well as other concerned states to jointly revive this resolution asameans of pursuing decisive action by the General Assembly in response to the gravity of the ongoing situation in Rakhine State and the evolving human rights and humanitarian crisis. A General Assembly resolution should demand an immediate end to the abuses, that humanitarian aid agencies have immediate and unhindered access to populations in need, and for the UN Fact-Finding Mission authorized by the Human Rights Council in Geneva to be allowed unfettered access into and within Myanmar to investigate alleged human rights abuses across the country. It should also demand that the Myanmar authorities commit to ensuring that all Rohingya and other refugees and displaced people are able to return to their places of origin safely, voluntarily, and with dignity, and to dismantling the institutional discrimination and segregation of Rohingya and other Muslims in Rakhine State that forms the backdrop to the current crisis. The resolution should also urge member states and the Security Council to explore possible avenues to bring perpetrators of crimes under international law to justice. We also urge members of the Security Council to add to the pressure on Myanmar authorities by seriously considering options such as an arms embargo against the military and targeted financial sanctions against individuals responsible for crimes and serious abuses. All concerned UN member states should also consider bilateral, multilateral, and regional actions they can take to place added pressure on the Myanmar government. In particular, we call on all states to immediately suspend military assistance and cooperation with Myanmar. If governments, UN officials and diplomats simply hold meetings and make speeches as atrocities continue in Myanmar, they bear the risk of failing to use every diplomatic tool at their disposal to stop the ethnic cleansing campaign and further crimes against humanity. In the face of mass destruction, killings and hundreds of thousands displaced, inaction should not be an option.
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများအဆုံးသတ်ရန် မန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ ၀င်နိုင်ငံများက ဖိအားပေးသင့်။ ကျွန်တော်တို ၏ xxxxx ကမ္ဘာ့အရပ်ဖက်အဖွဲ အစည်းများက မန်မာနိုင်ငံ၏ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုကို ၀ါးမျိုဖျက်ဆီးသည့်လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်ဆိုင်ရာကပ်ဘေးဆိုက်မှုများကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ ၀င်နိုင်ငံများက အခုချက်ချင်းစတင်ဖြေရှင်းရန်တောင်းဆိုပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်း ရးမှူးချုပ် Antonio Guterresနှင့် လူ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Zeid Ra’ad Al Husseinတို က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များက ဆက်လက် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်နေကြောင်းကို ဖ်ါပြခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အထောက်အထားများအရ မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များကျူးလွန်သည့် ရက်စက်မှုများက လူသားမျိုးနွယ် အပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာရှင်းပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ၄င်း၏အဖွဲ ၀င်နိုင်ငံများက အမြန်အရေးယူပေးဖို လိုပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက မန်မာအစိုးရကို အရေးယူဖို စဉ်းစားရန်၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့်ရာဇ၀တ်မှုများ အဆုံးသတ်ရန်နှင့် တားဆီရန်၊ အစဉ်အမြဲ တာဝန်ခံမှု၊ ညီညွတ်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုစသောကျင့်ဝတ်များရှိသည့်နိုင်ငံ(၁၄၄)နိုင်ငံမှ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ရေးတပ်(ARSA)၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို တုန် ပန်ရန်၊ မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များက စစ်ဆင်ရေးလုပ်သဖြင့်၊ သြဂုတ်လ၊ (၂၅)ရက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ
(၄)သိန်းကျော် နယ်စပ်ဖြတ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ ယင်းစစ်ဆင်ရေးတွင် ရိုဟင်ဂျာများကို ပစ်မှတ်ထားသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မိုင်းထောင်ခြင်း၊ လုယက်မီးရှို ခင်းများ ပါဝင်ပြီး၊ ဂိုလ်တုဓါတ်ပုံနှင့် မျက်မြင်အထောက်အထားများအရ ရွာပေါင်း(၂၀၀)ကျော်ပျက်စီးခဲ့သည်။ အခြားလူမျိုးစု ထာင်ပေါင်းများစွာကိုလည် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရွှ ပာင်းခဲ့ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ အပြင်းအထန်ရှုတ်ချမှုက မန်မာ၏ ရက်စက်မှုကို အဆုံးမသတ်နိုင်ပါ။ စက်တင်ဘာလ(၁၁)ရက် လူ အခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်သည့်အဆိုထဲတွင် ၂၀၁၆တွင် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေက်မှုက ကျယ်ပြန် ပီး၊ စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်မှုများက လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ကြောင်း Zeidက သတိပေးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ(၂၅)ရက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များ၏ ထိုးစစ်က လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ကြောင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ များက သတိပေးသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ ၀င်များက အရေးယူရန်၊ မန်မာစစ်တပ်နှင့် အရပ်ဖက် ခါင်းဆောင်များကို တိုက်ရိုက်ဖိအားပေးရန် အရေးကြီသည်။ မကြာသေးမှီအချိန်အထိ ဥရောပသမဂ္ဂသည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် မန်မာနိုင်ငံ၏ လူ အခွင့်အရေး အခြေအနေအပေါ် စ်ပါတ်လည်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုခုချမှတ်ရာမှာ အဓိက တာဝန်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည်နှစ်က အီးယူက ၂၀၁၆ခုနှစ် အ်ာကတိုဘာလထဲမှစပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်မှုများတွင် ကြိုးပမ်းမှုများကို ရပ်တန် အာင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လူ အခွင်းအရေးနှင့်
လူသားမျိုးနွယ်အကျပ်အစည်းများအပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖစ်ပွားနေသည့် အခြေအနေများကို တုန် ပန်ရာတွင် အထွေထွေညီလာခံ၏ အရေးယူမှုတစ်ခု အနေနှင့် ဤဆုံးဖြတ်ချက်တည်မြဲစေရန် အခြားဆိုင်ရာနိုင်ငံများကဲ့သို အရှေ တာင်အာရှ အာဆီယံအသင်း၊ အစ္စလာမ်အဖွဲ များနှင့်အတူ လူကိုင်ရန် အီးယူအဖွဲ ၀င်များကို တိုက်တွန်းအပ် ပါသည်။ အထွေထွေညီလာခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်က လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကို အခုချက်ချင်းအဆုံး သတ်ရန် တာင်းဆိုရမည်။ လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ များကို လိုအပ်သည့် လူတွေထံ အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်၊ ဂျနီဗာလူ အခွင့်အရေးကောင်စီက ခန် အပ်ထားသော ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ ကိုလည်း လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု များကိုစုံစမ်းရန်၊ မန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်းရောက်ခွင့်ရရန် တာင်းဆိုသင့်သည်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ အခြားဒုက္ခသည်များ၊ ရွှပြောင်းခံရသူများနှင့် မူလနေရာပြန်လာနိုင်အောင် မန်မာအာဏာပိုင်များက လုပ်ဆောင်ပေးဖို တာင်းဆိုရမည်။ လတ်တလောအကြပ်အတည်းဆိုက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပိုကွဲပြန် ကြဲ နသည့် ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆင်များထံ င်ငံတကာ တရားရုံးမှာ ခ်ါယူနိုင်အောင် နည်းလမ်းရှာဖို တိုက်တွန်းရမည်။ လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်သော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ပစ်မှတ်ထား ဘဏ္ဍာရေး ပိတ်ဆို အရေးယူရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ လာလောဆယ် မန်မာနိုင်ငံနှင့် စစ်ရေးကူညီပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုတွေကို ချက်ချင်းဆိုင်းငံ့ထားရန် တာင်းဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရက်စက်သောလူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေလို အစိုးရများ၊ ယူအန် အရာရှိများ၊ သံတမန်များက စည်းဝေးပွဲမှာမိန် ခွန်းပြောရလျှင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရေး ထိုးစစ်နှင့် လူသားများအပေါ်ကျူးလွန်သည့် အခြားရာဇ၀တ်မှု များကို ရပ်တန် အာင် ၄င်းတို ၏ သံတမန် နည်းလမ်းများကို သုံးဖို ပျက်ကွက်နေပါသည်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ အကြီးအကျယ်ဖျက်စီးမှု၊ သတ်ဖြတ်မှု၊ ထာင်ပေါင်းများစွာ ပာင်းရွှေ မှုများကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့် မပေးသင့်ပါ။
พวกเรา xx องค์กรพันธมิตรระดับโลกของหน่วยงานภาคประชาสังคม เราขอเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ ดำเนินมาตรการโดยทันที เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และหายนะภัยด้านมนุษยธรรม ที่ครอบคลุมประชากรชาวโรฮีนจาในเมียนมา แอนนิโอ กูเตียเรส (Antonio Guterres) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และซาอิด ราอัด อัล ฮุสเซน (Zeid Ra&#39;ad Al Hussein) ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ต่างกล่าวถึงปฏิบัติการโจมตีของกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาต่อชาวโรฮีนจาใน ตอนเหนือของรัฐยะไข่ โดยบอกว่าเป็นการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ ดังที่มีพยานหลักฐานปรากฏมากขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่าความทารุณโหดร้ายจากน้ำมือของกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาอ าจถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ องค์การสหประชาชาติและรัฐภาคีจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
เราขอกระตุ้นผู้แทนในองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะผู้แทนจาก 114 ประเทศที่แสดงพันธกิจต่อจรรยาบรรณ ความรับผิด ความกลมเกลียว และความโปร่งใส (Accountability, Coherence and Transparency (ACT) Code of Conduct) ซึ่งต่างสัญญาจะสนับสนุน “ปฏิบัติการในเวลาที่ทันท่วงทีและเด็ดขาด” เพื่อป้องกันหรือยุติการกระทำที่เป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมสงคราม ให้ดำเนินการโดยทันที เพื่อรับรองมติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่จะแก้ไขสถานกา รณ์นี้ และเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้กำหนดมาตรการที่จะนำมา ใช้กับรัฐบาลเมียนมา
ชาวโรฮีนจากว่า 400,000 คนได้อพยพข้ามพรมแดนเข้าสู่บังคลาเทศตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ภายหลังกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาเริ่มปฏิบัติการตอบโต้ ต่อการโจมตีที่มีการประสานงานของกองกำลังปลดแอกชาวโรฮีนจาแห่งรัฐอาระกัน (Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA) ในรัฐยะไข่ ปฏิบัติการทางทหารเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งการสังหารประชาชนอย่างกว้างขวาง การวางกับระเบิด การปล้นสะดม
และการวางเพลิงโดยมีชาวโรฮีนจาเป็นกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางในหมู่บ้านกว่า 200 แห่ง ทั้งนี้ตามภาพถ่ายดาวเทียมและปากคำของประจักษ์พยาน ประชาชนหลายหมื่นคนที่เป็นประชากรกลุ่มน้อยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นโดยเป็นผลม าจากความรุนแรงเหล่านี้ การประณามอย่างรุนแรงจากผู้นำองค์การสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ไม่ได้ช่วยให้ความทารุณโหดร้ายในเมียนมายุติลง ในถ้อยแถลงเปิดการประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายซาอิดตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2559 เขา “ได้เตือนให้เห็นถึงแบบแผนการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวโรฮีนจ า ซึ่งมีลักษณะเป็นการโจมตีอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบต่อชุมชนดังกล่าว ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” หน่วยงานภาคประชาสังคมยังได้เตือนว่า ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาต่อชาวโรฮีนจานับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม รุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ บรรดารัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติจึงต้องมีปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมและกด ดันโดยตรงต่อกองทัพและผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมา จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ สหภาพยุโรปเป็นผู้นำในการเสนอมติเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาต่อที่ประชุมสมัช ชาใหญ่ทุกปี แต่เมื่อปีที่แล้วสหภาพยุโรปได้ยุติความพยายามดังกล่าว แม้ว่ารัฐบาลเมียนมาจะยังคงก่อความรุนแรงต่อชาวโรฮีนจานับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ในตอนนี้ เราขอกระตุ้นให้รัฐภาคีของสหภาพยุโรปร่วมมือกับองค์การความร่วมมืออิสลาม(Org anization of Islamic Cooperation) และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) รวมทั้งรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอมติครั้งใหม่เพื่อเป็นแนวทางกดดันให้เกิดมาตรการที่เด็ดขาดผ่านที่ประชุ มสมัชชาใหญ่ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่องในรัฐยะไข่ และวิกฤติด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมที่ยังคงรุนแรงยิ่งขึ้น มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่นี้ ควรเรียกร้องให้มีการยุติการปฏิบัติมิชอบโดยทันที เปิดทางให้หน่วยงานบรรเทาทุกข์สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโ ดยไม่มีการปิดกั้นต่อกลุ่มประชากรที่มีความต้องการเหล่านี้
อนุญาตให้คณะทำงานเพื่อไต่สวนความจริงขององค์การสหประชาชาติ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่เจนีวา สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมาโดยไม่มีการปิดกั้น เพื่อสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ ทั้งยังควรเรียกร้องให้ทางการเมียนมาประกันว่าชาวโรฮีนจาและผู้ลี้ภัยกลุ่มอื่น ๆ และผู้พลัดถิ่น สามารถเดินทางกลับถิ่นฐานที่อยู่เดิมของตนอย่างปลอดภัย เป็นไปโดยสมัครใจและมีศักดิ์ศรี และให้งดเว้นการเลือกปฏิบัติในเชิงโครงสร้างและการปฏิบัติที่แยกแยะใด ๆ ต่อกลุ่มประชากรชาวโรฮีนจาและชาวมุสลิมอื่น ๆ ในรัฐยะไข่ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤติในปัจจุบัน มติดังกล่าวยังควรกระตุ้นให้รัฐภาคีและคณะมนตรีความมั่นคง ร่วมกันค้นหาแนวทางที่เป็นไปได้เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดอาญามาลงโทษตามกฎหมาย ระหว่างประเทศ
เรายังขอกระตุ้นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงให้เพิ่มแรงกดดันต่อทางการเมียนมา โดยรวมถึงให้พิจารณาอย่างจริงจังที่จะกำหนดห้ามไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธกับกองทั พเมียนมา และให้มีมาตรการแทรกแซงทางการเงินต่อบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรม และการปฏิบัติมิชอบที่ร้ายแรงนี้ รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องทุกประเทศควรพิจารณาใช้มาตรการระ ดับทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคที่กระทำได้ เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเมียนมา โดยเฉพาะเราเรียกร้องให้รัฐทุกแห่งชะลอการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทา งทหารโดยทันทีกับเมียนมา หากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่การทูตต่างมัวแต่จะประชุมและแสดงถ้ อยแถลง โดยปล่อยให้ความทารุณโหดร้ายในเมียนมาดำเนินต่อไป ย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการทูตที่มีทุกประการ เพื่อยุติปฏิบัติการสังหารล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่ยังคงเกิดขึ้น ในขณะที่มีการทำลายล้างอย่างกว้างขวาง การสังหาร และการทำให้ประชาชนหลายแสนคนพลัดถิ่น ประเทศต่าง ๆ จึงไม่ควรเพิกเฉย